अपरेसन गर्दागर्दै हिँडिदिए डाक्टर, भयो बिरामीको मृत्यु | Sawal Nepal |The Power of Information
अपरेसन गर्दागर्दै हिँडिदिए डाक्टर, भयो बिरामीको मृत्यु
Posted By: सवाल नेपालon: २०७६ फाल्गुन २६, सोमबार ११:५४ मा प्रकासित Tags: No Comments
भारतको गुडगाँवको एक प्रसिद्ध अस्पतालका चिकित्सकले रोगीको उपचारमा लापरवाही गरेको आरोप लागेको छ ।
पीडित परिवारले बताएअनुसार, जुन अर्थोपेडिक सर्जनको नाम लिएर उपचार गरियो ती डाक्टर अस्पतालमा थिएनन् । अपरेसन चल्दै गर्दा उनी फ्लाइट समातेर हिँडे ।
अपरेसनपछि बिरामीको रक्तचाप नियन्त्रणमा आएन र उसको मृत्यु भयो ।
अपरेसनपछि डाक्टरलाई भेट्न पाऔं भनी परिवारले अस्पताललाई भन्दा अस्पतालले डाक्टर उपस्थित छैनन् भन्यो । परिवारले हंगामा मच्चाउन थालेपछि अस्पताल व्यवस्थापनले घटनालाई सामसुम बनाउन खोज्यो ।
नौरंगपुर निवासी भीम सिंह शुक्रवार राति राजस्थानको रिंगसबाट हरियाणा फर्किरहेका थिए । बाटोमा उनको गाडीको टायर फाट्यो । उनले टायर बदलेर गाडीमा बस्दै गर्दा पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएको ट्रकले ठोक्यो । उनको गोडा कुल्चिँदै ट्रक अगाडि बढ्यो ।
हतारहतार उनलाई कैलाश अस्पताल लगियो । त्यहाँ प्राथमिक उपचार गरेपछि उनलाई गुडगाँवस्थित आर्टिमिस अस्पतालमा रिफर गरियो ।
शनिवार बिहान ६ बजेतिर उनलाई आर्टिमिस लगियो । त्यहाँ भएका डाक्टरहरूले छिट्टै अपरेसन गर्नुपर्छ भने । अपरेसन अघि परिवारलाई तीन लाख भारु डिपोजिट गर्न लगाइयो ।
लगभग साढे १२ बजे अपरेसन थिएटरमा लगेर लगभग ४ बजेसम्म उपचार गरियो । अपरेसनपछि भेन्टिलेटरमा राखियो । परिवारले अपरेसन गर्ने डाक्टरसँग भेट्न चाहे तर अस्पताल व्यवस्थापनले डाक्टरलाई भेट्न दिएन ।
दुई घन्टासम्म चिकित्सकसँग भेट्ने कुरामा झगडा भइरह्यो । त्यसैबीच परिवारका अन्य सदस्यले अस्पतालको कर्मचारीसँग डाक्टरको जानकारी मागे । डाक्टरले आर्टिमिस हस्पिटलबाहेक गुडगाँवमा एक निजी क्लिनिक चलाउने गरेको थाहा लाग्यो ।
अनि ती डाक्टरको शनिवार दिउँसो ३ बजे फ्लाइट रहेको र उनी बाहिर गएको पनि थाहा भयो । परिवारका मानिस भन्छन्, ‘३ बजे फ्लाइट भएका डाक्टर १ बजेतिर त एयरपोर्ट जानका लागि निस्किए होलान् । अनि कसले उनको नाममा अपरेसन गरिरहेको थियो त ?’
यसैबीच आइतवार बिहान ७ बजे भीम सिंहलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरिदियो । पोस्टमोर्टममा मल्टिपल इन्जुरीका कारण भीम सिंहको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आज फागु पूर्णिमा (होली), यस्तो छ पौराणिक मान्यता
पोथीको खोजमा २ हजार किलोमिटर टाढा पुग्यो यो बाघ
कतारबाट आएकाको हेल्चेक्राँइ ! झापामा एक परिवारका २ जना आइसुलेसनमा र ५ जना क्वारेन्टाइनमा
हेर्नुहोस बि.सं. २०७६ चैत १६गते आइतवार , इ.सं.२०२० मार्च २९को राशिफल
हेर्नुहोस बि.सं.२०७६ चैत- १७,सोमवार, इ.सं. २०२० मार्च ३०को राशिफल
कोरोना महामारीसँगै कन्डमको अभाव सुरु
दमक नगरपालिकाले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती!
कोरोनाभाइरस संक्रमणको परीक्षण गर्न हिँडेकी युवतीले पुलिसलाई थुकेपछि… (भिडियो)
कैलालिको चुरेमा देखिएन कोरोना नियन्त्रण गर्न तदारुकता ,६ न. वडाले दियो गैह्र जिम्मेवार जवाफ
दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुर तथा विपन्न बर्गका नागरिकहरुलाइ नगरपालिकाले अत्यावश्यक सामाग्रि उपलब्ध गराउने
लकडाउन एक साता लम्ब्याउने लम्ब्याउने तयारी